အကောငျးဆုံး..စီးပှားရေးပွိုငျဆိုငျနညျး | မာသငျ
စီးပှားရေးလုပျငနျး ပွိုငျဆိုငျမှုမှာ …
မီးကို မီးခွငျး မပွိုငျပဲ .. ရနေဲ့လောငျးရတယျ။
✔သူက ဆိုငျအကွီးကွီး နဲ့ပွိုငျလာရငျ…
ကိုယျက ဖောကျသညျ ဆကျဆံရေး (Customer Relationship) နဲ့ပွိုငျပါ။
✔သူက ပစ်စညျးအစုံလငျဆုံး ဆိုတဲ့ အရာ နဲ့ ပွိုငျလာရငျ….
ကိုယျက တဈမြိုးကောငျး( Specialization) နဲ့ပွိုငျပါ။
✔သူက ဈေးနုနျးခခြွငျး ဆိုတဲ့ အရာနဲ့ပွိုငျလာရငျ….
ကိုယျက တနျဖိုးပိုပေးခွငျး(Value added) နဲ့ပွိုငျပါ။
✔သူက လက်ကားအရောငျး ဆိုတာနဲ့ပွိုငျလာရငျ…
ကိုယျက လကျလီအရောငျး(Retail Channel) နဲ့ပွိုငျပါ။
✔သူက ဖွနျ့ခြိရေးလကျတံအားကောငျးမှု နဲ့ပွိုငျလာရငျ …
ကိုယျက အငျတာနကျဈေးကှကျထိုးဖောကျခွငျး (Virtual Channel) နဲ့ပွိုငျပါ။
✔သူက ဘရနျးကွီးကွီးတှသေုံးပွီး ပွိုငျလာရငျ…
ကိုယျက ဆိုငျခှဲခြိနျးမြား (Chain & Convenience) နဲ့ပွိုငျပါ။
✔သူက လုပျလာခဲ့တာကွာပွီဆိုတဲ့စီနီယာကမြှု နဲ့ပွိုငျလာရငျ….
ကိုယျက မတူညီကှဲပွားခွားနားမှု (Differentiation) နဲ့ပွိုငျပါ။
✔သူက လုပျငနျးကွီးပွီး ငှကွေေးတတျနိုငျတော့၊ ရကျရောမှုနဲ့ပွိုငျလာရငျ…
ကိုယျက သေးငယျတဲ့လုပျငနျးဖွဈတဲ့အတှကျ ပေါ့ပါးမွနျဆနျမှု (Fast) နဲ့ပွိုငျပါ။
ကိုယျက ပြံ့နှံ့နိုငျစှမျး (Virousibility) နဲ့ပွိုငျပါ။
ကိုယျက .. ကြှနျတျော “မာသငျ” ဆီ အမွနျဆုံး ဆကျသှယျပတေော့….
သူဌားသှားမှာ စိုးလို့ပါ။ ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပြိုင်ဆိုင်မှုမှာ …
မီးကို မီးခြင်း မပြိုင်ပဲ .. ရေနဲ့ လောင်းရတယ်။
✔သူက ဆိုင်အကြီးကြီး နဲ့ ပြိုင်လာရင်…
ကိုယ်က ဖောက်သည် ဆက်ဆံရေး (Customer Relationship) နဲ့ ပြိုင်ပါ။
✔သူက ပစ္စည်းအစုံလင်ဆုံး ဆိုတဲ့ အရာ နဲ့ပြိုင်လာရင်….
ကိုယ်က တစ်မျိုးကောင်း( Specialization) နဲ့ ပြိုင်ပါ။
✔သူက ဈေးနုန်းချခြင်း ဆိုတဲ့ အရာနဲ့ ပြိုင်လာရင်….
ကိုယ်က တန်ဖိုးပိုပေးခြင်း(Value added) နဲ့ ပြိုင်ပါ။
✔သူက လက္ကားအရောင်း ဆိုတာနဲ့ ပြိုင်လာရင်…
ကိုယ်က လက်လီအရောင်း(Retail Channel) နဲ့ ပြိုင်ပါ။
✔သူက ဖြန့်ချိရေးလက်တံအားကောင်းမှု နဲ့ ပြိုင်လာရင် …
ကိုယ်က အင်တာနက်ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ခြင်း (Virtual Channel) နဲ့ ပြိုင်ပါ။
✔သူက ဘရန်းကြီးကြီးတွေသုံးပြီး ပြိုင်လာရင်…
ကိုယ်က ဆိုင်ခွဲချိန်းများ (Chain & Convenience) နဲ့ ပြိုင်ပါ။
✔သူက လုပ်လာခဲ့တာကြာပြီဆိုတဲ့ စီနီယာကျမှု နဲ့ ပြိုင်လာရင်….
ကိုယ်က မတူညီကွဲပြားခြားနားမှု (Differentiation) နဲ့ ပြိုင်ပါ။
✔သူက လုပ်ငန်းကြီးပြီး ငွေကြေးတတ်နိုင်တော့၊ ရက်ရောမှုနဲ့ ပြိုင်လာရင်…
ကိုယ်က သေးငယ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ပေါ့ပါးမြန်ဆန်မှု (Fast) နဲ့ ပြိုင်ပါ။
ကိုယ်က ပျံ့နှံ့ နိုင်စွမ်း (Virousibility) နဲ့ ပြိုင်ပါ။
ကိုယ်က .. ကျွန်တော် “မာသင်” ဆီ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေတော့….
သူဌားသွားမှာ စိုးလို့ ပါ။ ။